The Heretics: Film Review နှင့် Cast Interview - iHorror
ပင်မစာမျက်နှာ ထိတ်လန့်ဖျော်ဖြေရေးသတင်း The Heretics: Film Review နှင့် Cast Interview
The Heretics: Film Review နှင့် Cast Interview
by ကယ်လီ McNeely မတ်လ 26, 2017
ကရေးသား ကယ်လီ McNeely မတ်လ 26, 2017
အနက်ရောင် Fawn ရုပ်ရှင်တွေတစ်လိပ်အပေါ်ဖြစ်ကြသည်။ ကနေဒါထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီသည်ပြီးခဲ့သည့် ၄ နှစ်အတွင်းရုပ်ရှင်ကား ၈ ကားကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ catalog ပါဝင်သည် Antisocial & Antisocial 2, The Drownsman, Sublet, Bite, Her Out, နှင့် အိပ်ရာ သေလွန်သူ။ သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ရုပ်ရှင်၊ The Heretics, မျိုးစုံ Sub- အမျိုးအစားမော်ဒယ်စုံလင်ခြင်းနှင့်ပြုလုပ်နေစဉ်ပျော်စရာအချိန်တစ်ခုငရဲကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပဟေpartိတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့်နတ်ဆိုးစွဲခြင်းစစ်မြေပြင်၊ အချို့သောစစ်မှန်သောခုန်ချမှုများနှင့်တင်းမာနေသောတည်ဆောက်သူများအတွက်ရုပ်ရှင်ငရုတ်ကောင်း။ အဆိုပါနတ်ဆိုးသတ္တဝါဒီဇိုင်းထူးခြားတဲ့နှင့်ထိရောက်စွာ unnerving ဖြစ်ပါတယ် မင်းမြင်ဖူးလား ကိုက်Back Fawn ဟာကိုယ်ခန္ဓာကြောက်မက်ဖွယ်ရာကိုရှောင်ရှားပြီးအလုပ်ကိုမှန်ကန်အောင်လုပ်ဖို့သူတို့ရဲ့လက်တွေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတာသိပါတယ်။
In The Hereticsနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောနတ်သမီးသည်မိန်းကလေးငယ်တစ် ဦး ကိုပြန်ပေးဆွဲ။ ကျိုင်းကောင်လ၏အလင်းအားဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုစွန့်လွှတ်သည်။ နောက်တစ်နေ့မနက်တွင်မိန်းကလေးသည်နိုးလာသည်။ သွေးထဲတွင်သွေးသွန်ပြီးအသေကောင်များနှင့်ဝိုင်းရံထားသည်။ သို့သော်လုံခြုံသည် - သို့မဟုတ်သူမထင်သည်။ နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကျိုင်းကောင်လသည်နောက်တဖန်ပြန်တက်လာပြီးထိုနတ်သမီးကိုရှင်သန်ကျန်ရစ်သူအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ကထပ်မံဖမ်းမိသည်။ သူမသည်ဝေးလံခေါင်သီသောအခန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားခံရသည်။ ထိုတွင်သူမသည်ဤနှစ်များအတွင်းနတ်ဆိုးတွင်ကြီးထွားနေပြီးအရုဏ်မတိုင်မီသူသည်မြင့်တက်လာလိမ့်မည်ဟုသူသိသည်။
Nina Kiri၊ Jorja Cadence နှင့် Ry Barrett တို့သည်အလွန်ကောင်းသောဓာတုဗေဒပညာရှိသည်။ သူတို့ရဲ့ခိုင်မာပြီးရိုးသားတဲ့ဖျော်ဖြေမှုတွေကရုပ်ရှင်တစ်ခုလုံးကိုသယ်ဆောင်ပေးတယ်၊ သူတို့ကစီမံကိန်းကိုစိတ်အားထက်သန်တယ်ဆိုတာရှင်းနေပါတယ်။
ငါကြယ်နှင့်အတူထိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ် The Heretics ယင်း၏ကမ္ဘာ့ Premiere မတိုင်မီရုပ်ရှင်ဆွေးနွေးရန်။
ကယ်လီ McNeely: သင်ဘယ်လိုဖော်ပြမလဲ The Heretics?
Jorja Cadence: ဒါပေမယ့်ဒါကလည်းအနာဂတ်ရုပ်ရှင်တွေပါ။ (ရယ်သံများ)
Ry Barrett: ဒါဟာ Cabin-In-The-Woods subgenre အောက်မှာကျပေမယ့်အများကြီးပိုပြီးသွားရှိပါတယ်။ ဒါဟာအခန်းထဲမှာမတည်ရှိပါဘူး ၎င်းသည်အကြောက်လွန်ရောဂါစွဲစေသော၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အချစ်ဇာတ်လမ်း၊
ဂျေစီ: ရုပ်ရှင်မှာကွဲပြားတဲ့ဒြပ်စင်တွေအများကြီးရှိတယ်။ ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်အလက်အားလုံးကိုမင်းမမြင်မချင်းပြောပြဖို့ခက်တယ်။
NK: ငါထင်တာကငါ့ရဲ့ဇာတ်ကောင်ဂလိုရီယာဟာအသွင်ပြောင်းလဲမှုကိုဖြတ်သန်းပြီးသူ့ကိုယ်သူအကြောင်းအများကြီးလေ့လာပြီးနောက်မှအပြင်ဘက်ကိုစတင်စဉ်းစားလာသည်။ ဒါကြောင့်ဒီဟာတွေအများကြီးဟာအတွင်းပိုင်းဖြစ်ပြီးအဆုံးဆီသို့မိတ်ကပ်နှင့်ရုပ်ရှင်သွားသည့်နေရာသည်အလွန်လူ့အသွင်ပြောင်းလဲမှုအရဖြစ်သည်။
NK: ပထမနေ့ ၈ နာရီ၊ ၇ နာရီ ၆ နာရီလောက်ကြာတယ်၊ ငါတို့လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်များသောအားဖြင့်တစ်နေ့ကို ၆ နာရီလောက်ရှိတယ်။
ကီလိုမီတာ: အဘယ်အရာကိုရန်သင့်အားဆွဲငင် The Heretics စီမံကိန်းနှင့်သင့်ဇာတ်ကောင်များ?
ဂျေစီ: ကျွန်တော်ကစပြီးနားထောင်နေတုန်းတော်တော်လေးခဲယဉ်းတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုအများကြီးမပေးခဲ့ဘူး။ အထူးသဖြင့်ငါ၏အဇာတ်ကောင်များအတွက်။ ငါနားထောင်ခြင်း3ကြိမ်လုပ်ခဲ့တယ်ထင်နှင့်ငါတိုင်းဇာတ်လမ်းနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ဖြစ်ပျက်နှင့်ပတ်သက်။ ပိုမိုငါ့ကိုပြသနိုင်မည့်အသစ်တစ်ခုမြင်ကွင်းတစ်ခုရလိမ့်မယ်။ ဒါဟာနောက်ဆုံးအချိန်သေချာပေါက်မဖြောင့်ဟုငါထင်သော! ဒါကြောင့်ငါစီမံကိန်းကိုဆွဲဆောင်ရသည့်အကြောင်းရင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာနားထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအလွန်အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ သင်လုပ်နေတဲ့မြင်ကွင်းတွေဟာကြီးကျယ်တယ်ဆိုရင် အကယ်၍ မင်းကတကယ်ကိုစီမံကိန်းရမယ်ဆိုရင်စီးနင်းလိုက်ပါလိမ့်မယ်။
ဂျေစီ: ဟုတ်တယ် နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ။ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး၊ ပြီးတော့ငါဒီလိုလုပ်ရမယ်”
NK: ငါပထမဆုံးအကြိမ်မဲချခြင်းမှာ Black Fawn မှငါသိနှင့်ပြီးသားလူများနှင့်အတူရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မြင်တွေ့ရန်အလွန်အေးခဲ။ အကျွမ်းတဝင်ရှိသောမျက်နှာများနှင့်အမည်များကိုတွေ့သောအခါသင်အမြဲစိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်သည်။ နားထောင်ခြင်းဖြစ်စဉ်အတွက်ငါနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ခဲ့သည် ခင်ဗျားရဲ့ရက်အနည်းငယ်လောက်ပဲနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသွားနိုင်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဇာတ်ညွှန်းအပြည့်အဝရပြီးငါသိတဲ့သရုပ်ဆောင်နည်းပြတစ်ယောက်နဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တုန်းကဇာတ်ကောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အရာတွေကိုစူးစမ်းလေ့လာခဲ့တယ်။ ငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားလာပြီးမြင်ကွင်းတိုင်းလိုလို၊ ဘုရားသခင်လိုငါမြင်ကွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ့အတွက်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။
RB: ငါချတ် [Archibald, ဒါရိုက်တာ] နှင့် Black Fawn အဖွဲ့နှင့်အတူလက်တဆုပ်စာအကြိမ်အနည်းငယ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါချတ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အမြဲစိတ်ဝင်စားတယ်။ သူကကျွန်တော့်ကိုရုပ်ရှင်၏ပထမတစ်ဝက်ကိုအကြမ်းဖျင်းပေးပို့ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်မည်သည့်နေရာတွင်သွားသည်သို့မဟုတ်မည်သို့ဖြစ်ပျက်သည်ကိုကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်မသိသေးပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏သောမတ်စ်စာလုံး၏ဒွိုင်တွယ်မှုစိတ်ကူးကိုကျွန်တော်ရခဲ့သည်။ ပရိသတ်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အမြင်များနှင့်ဆော့ကစားရန်။ အက္ခရာတစ်မျိုးစီသည်သူတို့ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းဖြင့်ရှိသည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားအမှန်တကယ်ဆွဲဆောင်သောအရာဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်မှာသူ၏အခန်းကဏ္ the ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်သည်။ သူကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော်တော်လေးပျက်စီးနေတာကြောင့်အဲဒါကို ၀ င်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
ကီလိုမီတာ: ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုကိုကြည့်နေသောပရိသတ်တစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မြင်သောအရာများမှသင်ယူလေ့ရှိသည်။ တူသောသင်ခန်းစာများသည်အပေါ်ထပ်သို့မတက်၊ သင်၏လက်နက်ကိုမပစ်ပါနှင့် The Heretics?
NK: စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားသည်အလွန်ထင်ရှားသည်၊ ထို့ကြောင့်သင့်အတွက်ပုံမှန်ဖြစ်သည့်ပုံမှန်ဖြစ်ရန်ခွန်အားရှိရုံသာဖြစ်သည်။
RB: မင်းရဲ့အတိတ်ဟာမင်းဘယ်သူလဲဆိုတာသေချာပေါက်မပြောင်းလဲဘူး လုပ်နိုင်ပေမယ့်လုပ်စရာမလိုပါဘူး
RB: ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားဒြပ်စင်တွေအများကြီးပါဝင်သည်။ ၎င်းတွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒြပ်စင်များ၊ သဘာဝလွန်ဒြပ်စင်များရှိသည်၊ ၎င်းသည်သစ်သားအောက်ခံနှင့်ဘာသာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာရှုထောင့်များရှိသည်။ ဒီနေရာမှာပစ်ချခံရတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူကအလွန်ရှုပ်ထွေးမရပါဘူး။
Black Fawn Films မှတစ်ဆင့်
အနက်ရောင် fawn ရုပ်ရှင်ကနေဒါindie ထိတ်လန့်အယူမှား
Robert Rodriguez သည် New York Remake မှထွက်ပေါ်လာဖွယ်ရှိသည်
13 အဘယ်ကြောင့်သောကြာနေ့ 13 အပိုင်း III III ကိုနေဆဲ 35 မှာကျောက်တောင်ကြီးအဘယ်ကြောင့် XNUMX အကြောင်းပြချက်